MADAXWEYNE RIYAALE OO SI KADISO AH UGU TAGAY MADAALADA BURCO IYO SOODHAWYNTII OO KALA MUTAY | Toggaherer's Weblog
Burco 03 June 2009 (THN)
Waftigii madaxweynaha jamhuuriyada Somaliland mudane Dahir Riyaale Kahin ayaa si lama filaan ah u tagay magaalo madaxda gobolka Togdheer ee Burco taas oo ay safaka ay la wadaagayee raxan wasiiro ah iyo xildhibaano tiro badan .
Waftiga oo saaka barqadii soo gaadhay magaalda Burco markii ay soo gaadheen magaalada ayaa waxaa loo galbiyey xagaa iyo guriga martida taas oo uu madaxweynaha iyo waftigiisu ku nasan doonaan.
Waxaa uu madaxweyne Riyaale kala kulmay magaalda Burco soo dhawayn aad u diiran oo taas oo ay soo dhawayntiisa ka qayb qaateen maamulka gobolkaasi iyo kumaanaan dadwaynaha reer Burco ah halkaas oo ay lulayeen caleemo qoyan iyo calanka jamhuuriyada Somaliland iyo waliba madaxeyne Riyaale Sawirkiisa .
Mar aan khadka telka kula xidhiidhan xubno ka mid ah waftida madaxwyenaha ayaa waxa ya noo sheegen in uu safarkoodani kaliya ku eekayn magadalada Burco ee uu soo socon doono kuna tagi doono dhamaan gobolada dalka.
Wixii warar ah ee ka soo kordha sawiro iyo maqal ba waxaan idiinsoo gudbin doonaa dhawaan inahsaalaah